पाल्पाको रानीमहल : खड्गशम्शेर र तेजकुमारीको अमर प्रेमस्तम्भ « Janata Samachar
पाल्पाको रानीमहल : खड्गशम्शेर र तेजकुमारीको अमर प्रेमस्तम्भ
प्रकाशित मिति : फाल्गुन १, २०७७ शनिबार
काठमाडौं । पाल्पा र स्याङ्जाको सीमानामा कालिगण्डकीको किनारामा अवस्थित रानीमहल प्रेमको अनुपम प्रतीक मानिन्छ ।
१९५० सालमा पाल्पा गौडाका तैनाथवाला प्रधान सेनापति खड्ग शमशेरले आफ्नी दिवंगत रानी तेजकुमारीको सम्झनामा रानीमहल निर्माण गरेका थिए । पाल्पाको बौघागुम्हा र खानीगाउँ गाविसको सीमानामा कालीगण्डकीको किनारमा बनाइएको ताजमहल जिल्ला सदरमुकाम तानसेनदेखि १४ किलोमिटर उत्तरमा छ । हरेक वर्ष प्रणय दिवसका दिनमा यो महलमा सच्चा जोडीहरु आफ्ना अतितलाई सम्झँदै वर्तमानमा टेकेर भविष्यको कल्पना गरिरहेका भेटिन्छन् ।
को हुन् खड्गशम्शेर ?
खड्गशमशेर जङ्गबहादुर राणा नेपाली सेनाका प्रधान सेनापति थिए । उनको जन्म कमाण्डर धीरशमशेर राणाको तेश्रो पुत्रको रूपमा १६ फेब्रुअरी, १८६१ भएको थियो ।
वि.सं. १९४२ मा उनले आफ्नै ठुलोबुवा प्रधानमन्त्री रणोद्दिप सिहबहादुर राणाको हत्या गरे । त्यसपश्चात उनी प्रधान सेनापति भए । प्रधानमन्त्रीको मर्यादामा पनि दाजु वीरशमशेर जङ्गबहादुर राणा पछिको दोस्रो थिए उनी ।
तर सन् १८८७ मा उनलाई प्रधानमन्त्रीको रोलक्रमबाट निश्काषित गरी ठाडा जेलमा बन्दी बनाएर राखियो । त्यसको दुई वर्षपछि सन् १८८९ मा उनी पाल्पाको बडाहाकिममा नियुक्त भइ पुनस्र्थापित भए । सन् १९०१ मा धनकुटाको बडाहाकिम समेत भएका थिए उनी । उनले सन् १९०९ मा बेलायतका महाराज एडवार्ड सातौँबाट व्यक्तिगत राजाको उपाधि पाएका थिए ।
खडगशमशेरले डा. फुहररको सहयोगमा लुम्बिनी स्थित अशोकस्तम्भ, कपिलवस्तुका पुरातात्विक वस्तुको पुनस्थापनामा सेत महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका थिए । डा. फुहरर भारतीय पुरातत्व विभागका सदस्य थिए । गौतम बुद्धको जन्मस्थल नेपालमा हो भनी खडग शमशेरले नै पत्ता लगाएका थिए ।
रानीमहलको निर्माण खड्गशमशेर आफ्नी रानी तेजकुमारीलाई औधी प्रेम गर्थे । जब पत्नी तेजकुमारीको असमायिक निधन भयो तब खड्गशमशेर केही समय विक्षिप्त जस्तै बने । पछि पत्नीको सम्झनामा कालिगण्डकी किनारामा महलमा बनाउन लगाए । वि.सं. १९५० मा निर्माण शुरु भएको महल सम्पन्न हुन चार वर्ष लाग्यो । पत्नी तेजकुमारीको स्मृतिमा कालीगण्डकीको तटमा बनाइएको त्यही भव्य दरबारलाई रानीमहल भनियो र त्यो तटलाई रानीघाट भनियो । जुन नेपालको ताजमहल भनेर चिनिन्छ ।
चार वर्षमा दरबार मन्दिर पाटीपौवासहितको निर्माण कार्य पूरा भएको रानीमहल दरबार कालीगण्डकी नदीको उत्तरतर्फ हानिने मोडमा विशाल चट्टानमाथि रहेको छ । पश्चिमी कलाशैलीमा रहेको रानीमहल दरबारको बायाँतर्फ शीत्तलपाटी दरबार परिसरमा फोहराका लागि कुँदिएका ढुङ्गाले निर्मित दुईवटा पोखरी दाहिनेतर्फ पहरा दिने स्थल छ भने खुड्किलोको बायाँतर्फ एउटै किसिमको शिव र गङ्गाका दुई मन्दिर छन् ।
यो महल युयानीशैलीमा बेलायती इन्जिनियरको डिजाइनमा बनाइएको हो । करीब ११ रोपनी क्षेत्रफलमा रहेको नेपालको यो ताजमलमा २४ वटा कोठा छन् । यस महलको पूर्वतिर खड्ग शमशेरको पूजा गर्ने कोठा, माथिल्लो तलामा बैठक कोठा र मध्य तलामा खड्ग शमशेरका कोठाहरू रहेका छन् । त्यस्तै वरिपरि रहेको बगैंचा र रानी पोखरीले महल आकर्षक देखाएको छ ।
दरबारको मूलढोकाबाट कुँदिएको ढुङ्गा र इँट्टाबाट बनाइएका खुड्किलो तल सिधा कालीगण्डकी नदी कुण्डमा जोडिएको छ । प्रसिद्ध मुक्तिनाथ तिर्थ जाने मुख्यद्वार भएकाले तिर्थालुहरूलाई बस्ने सुविधा सहितका पौवा समेत निर्माण गरिएको थियो । १९५० सालमा शिलान्यास गरी १९५४ सालमा कालिनदिको चट्टानमाथि पश्चिमी कला कैशलको बेजोड नमूनाले सिंगारेर ४ वर्षको अवधिमा महत्वपूर्ण फर्निचर, महँगा महँगा सजावटका सामाग्रीले भरिपूर्ण कोठामा एक्लै रात बिताउँदा खड्ग शमशेर कहिलेकहिले आफ्नी दिवंगत रानीलाई सम्झँदै भावविह्वल हुँदै मध्यरातमा रुँदै चिच्याउँथे भन्ने गरिन्छ ।
आफ्नी दिवङ्गत रानी तेजकुमारीको सम्झनामा दरबारको निर्माण गरिए तापनि उनले पाँच वर्षसम्म मात्र राज गर्न पाएको जानकारहरूको भनाइ छ ।
विसं १९६० मा खड्ग शमशेरले श्री ३ को पदसहित शासनसत्ताको बागडोर आफूले सञ्चालन गर्न खोज्यो भन्ने षड्यन्त्रको छनक पाएपछि चन्द्र शमशेरले पाल्पामा थप सेना पठाइ तैनाथी आफनो हातमा लिएका थिए । खड्गशमशेरले आफूमाथि थप खतरा उत्पन्न हुने त्रासमा दरबारमा रहेका सबै बहुमुल्य बस्तु छाडेर तीन साँचो र सरकारी ढुकुटी लिई भारत पलायन भएका थिए । त्यसपछि प्रेमको प्रतिक ठानिने रानीमहल बेवारिसे बन्न पुगेको स्थानिय वासिन्दाहरू बताउँछन् । दिवङ्गत रानीको सम्झनामा बनाइएकोले रानीमहल दरबारलाई ’प्रेमको प्रतिक’ का रूपमा लिइने गरिन्छ । पाल्पाको सदरमुकाम तानसेनबाट उत्तरपश्चिम २.३० घण्टा पैदल यात्राबाट पुग्न सकिने रानीमहलमा पर्यटकीय आकर्षण बढ्दै गएको छ ।
कोरोना महामारी र खोपको विश्व राजनीति
करिब एक दर्जन खोपहरु विश्व स्वास्थ्य संगठनको अनुमतिले स्वीकृत भएका छन् । ती खोपहरु बेलायत,
कामीरिता शेर्पाद्वारा २५ औं पटक सगरमाथाको आरोहण
काठमाडौं । कामीरिता शेर्पाले २५ औं पटक विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको आरोहण गर्नुभएको छ ।
सिंगापुर : जहाँ कोरोनाको कुनै डर छैन,सामान्य छ जनजीवन
काठमाडौं । विश्वका धेरै देशहरु अहिले कोभिड १९ को संक्रमणले आक्रान्त छ । दक्षिण एसियाको
देशका अस्पतालहरुमा बेड अभाव, वीर र शिक्षण अस्पताल भने सुनशान (फोटो फिचर)
काठमाडौं । देशभर कोभिड १९ संक्रमितको संख्या भयावह रुपमा बढ्दै गएपछि अस्पतालहरुमा बिरामीको चाप बढेको